जम्मा २ जना मान्छे बस्ने सहर ! - २३ भाद्र २०७५, NepalTimes
जम्मा २ जना मान्छे बस्ने सहर !
अमेरिकाको ड्याकोटा राज्यको उत्तरी भागमा रहेको एउटा सहर, जुन सहरको मेयर रहेका व्यक्तिको निधन भएसँगै सहरको अस्तित्व नै लोप हुने जोखिम बढेको थियो ।
तर पछिल्लो समय केही आश पलाएर आएको छ कि यो सहरको जनसंख्या बढेर ४ जना पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । यतिबेला त्यो सहरको जनसंख्या जम्मा २ जना मात्र रहेको छ । रुजोस्थित म्याकलिन काउन्टीका मेयर ८६ वर्षीय ब्रुस लोरेन्जको गत जुलाईमा निधन भएसँगै उक्त सहरको अस्तित्व नै लोप हुने जोखिम बढेको थियो ।
सहरको अस्तित्व कायम राख्नका लागि न्यूनतम जनसंख्या ३ जना हुनुपर्ने रहेछ ।सहरमा अहिले लाउरिन्डा रोलोसन र उनका पती टेरी रोलोसन मात्र बस्दछन् ।अहिले उक्त सहरको नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि योग्य एकजना अर्का व्यक्ति फेला परेको जनाईएको छ ।
ग्रेग स्कमाल्ज नामका व्यक्तिसँग रुसो सहरको पोष्ट बक्स नम्बर रहनुका साथै कुखुरा र घोडा फार्म हेर्नका लागि हरेक दिन सहरमा आउने गर्दछन् । त्यसैले उनलाई सहरको नागरिकता प्रदान गरी मेयर बनाउने तयारी गरिएको छ ।
ग्रेग र उनकी पत्नी मिचेल हाल भेल्भा सहरमा बस्दछन् । तर रुजो बस्नका लागि उनीहरुले आफ्नो घर निर्माण गरिरहेका छन् ।
रुजो सहर सन् १९०९ मा स्थापना हुँदा त्यहाँ १ सय ४१ जनसंख्या थियो ।तर, सन् १९५६ पछि अन्नमिल बन्द भएसँगै यहाँका मानिसहरु बसाई सर्न थाले ।